Insimbi yokuqala yokwenza ibha yokucubungula nokusabalalisa iphrojekthi kaJianlong Group isizofika
Isikhathi seposi: 02-26-2021
NgoFebhuwari 22, iJianlong Group, China Railway 9th Bureau Group Co, Ltd. (ebizwa ngeChina Railway 9th Bureau), kanye neJianke Machinery (Tianjin) Co., Ltd. (ebizwa ngeJianke Machinery (Tianjin)) ibibanjelwe kathathu izingxoxo eShenyang, esifundazweni iLiaoning. Isayine “Ukubambisana Kontathu ...Funda kabanzi »
Uqhubeke nokuba ngaphansi kwengcindezi izolo, uLun Nickel uwele ngaphezu kuka- $ 500 ekuhwebeni ngezinsuku zangaphakathi
Isikhathi seposi: 02-24-2021
ILun Nickel igijimele phansi izolo. ILun Nickel ivulwe nge-US $ 19,500 / ton, yase isukuma ngokushesha. I-intraday ephakeme kakhulu ishaye amaphuzu we-19,900, futhi ukukhuphuka okukhulu kakhulu bekufike ku- $ 380. Ngemuva kwalokho, yaqhubeka yancipha. I-intraday ephansi ishaye amaphuzu we-18,985, kanti ukwehla okukhulu kwe-intraday bekuyi-535.Funda kabanzi »
Izintengo zensimbi zikhuphuke, zashaya into entsha cishe eminyakeni eyi-8
Kusukela ngoNovemba kulo nyaka, amanani entengo yensimbi angene esikhathini sokukhula okusheshayo. NgoDisemba 21, intengo yokuvala yenkontileka yesikhathi esizayo yensimbi enkulu yafinyelela ku-1144.5 yuan / ton, irekhodi eliphakeme selokhu ikusasa lensimbi yafakwa ohlwini ngo-2013. Ngosuku olufanayo, i-China Iron Ore Price Index (CIOPI) ...Funda kabanzi »
Ubhadane luhlasela, izinkampani zensimbi zomhlaba wonke zilwa nobhubhane ngenkuthalo ukuqinisekisa ukukhiqizwa
Ethintwe wubhubhane olusha lomqhele pneumonia, insimbi yomhlaba kanye nezinkampani ezihlobene nomfula kanye nomfula ziye zasika kaningi ukukhiqizwa futhi zamisa ukukhiqizwa kusukela ekuqaleni konyaka we-2020. ..Funda kabanzi »
Januwari 13th: Ikusasa lensimbi engenasici lenyuke ngama-yuan ayi-170 / ithani, ngesisekelo se-950 yuan / ton
Ikusasa lanamuhla lensimbi engagqwali lishintshe kakhulu, inkontileka engu-2103 ivale u-170 yuan yaya ku-13,910 yuan / ton, kanti ikusasa lensimbi engagqwali le-2103 intengo yenkontileka yayingu-13,920 yuan / ton. Namuhla, inani lentengo elizimele lama-304 / 2B 2.0 anyawo amane emakethe yeWuxi spot liyi-14,870 yuan / ton ...Funda kabanzi »
I-TISCO "ithatha ubunikazi" insimbi engagqwali yeBaowu, izinguquko ezintsha
Isikhathi Iposi: 01-04-2021
U-2021 uqalile, futhi ukusebenza kwangempela kweBaowu ngemuva kokuhlelwa kabusha kweTaigang nakho sekuqalile, ngamunye ngamunye… NgoDisemba 23, iTISCO yamemezela ukuthi isiqedile ukubhaliswa kwezinguquko zezimboni nezentengiselwano, futhi umninimasheya olawulayo washintshelwa eChina Baowu , ukumaka ...Funda kabanzi »
Izindlela eziningana zokwelashwa ngaphezulu kwepayipi lensimbi elingenasici
Isikhathi Iposi: 12-22-2020
Lapho amapayipi amaningi wensimbi engagqwali ephuma efektri, ayafana nemikhiqizo eminingi esiyibona ezimpilweni zethu. Ubuso bucwebezelwe, bubonisa ubukhazikhazi bensimbi obumhlophe obumhlophe, futhi bushelelezi futhi abushelelezi. Leli yipayipi lokukhanya elikhanyayo wonke umuntu avame ukulibiza. Ngaphezu kwalokho, kulezo zinto ...Funda kabanzi »
Usihlalo weBaowu waseChina neqembu lakhe bebehambele umcimbi wokugubha ukuhlolwa kwe-hot umthwalo oshisayo weBaosteel Desheng 1780
Isikhathi Iposi: 12-14-2020
Ekuseni ngoDisemba 14, uchungechunge lwemisebenzi yokwazisa kanye nemfundo eyenzelwe "iminyaka eyi-130 yeBaowu eChina" kanye nomcimbi wokugubha ukuhlolwa kokulayisha okushisayo kwephrojekthi ebalulekile i-Baosteel Desheng 1780 insimbi engenazinsimbi eshisayo eshisiwe esifundazweni saseFujian ibanjelwe eBaosteel ...Funda kabanzi »
I-HBIS 60,000-ton bridge bridge isekela iPingtan Strait Bridge
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, ibhuloho lokuqala lokusebenzisa umgwaqo ohamba olwandle lomgwaqo ohamba olwandle kanye nebhuloho lokusebenzisa omabili lomgwaqo omude kunawo wonke emhlabeni-ibhuloho lePingtan Strait elisetshenziswa kabili kanye nebhuloho lesitimela livulelwe ithrafikhi. Ngesikhathi ukwakhiwa kwebhuloho, i-HBIS inikeze ngaphezu kwamathani ayi-60,000 aphezulu -...Funda kabanzi »
Ukwanda kwantambama ngama-50! Ikhoyili yensimbi engagqwali engu-201 eshisayo engamamitha amahlanu iyaqhubeka nokuqhubekela phambili
Emakethe yantambama, isitokisi sekhoyili yensimbi eshubile esigoqiwe esingamamitha angu-201 sizokhushulwa ngama-50-100 yuan / ton. Ngokuya ngempendulo evela kubathengisi bezimakethe, ukuthengiselana ekuseni bekuhlaba umxhwele impela, kanti intengo yensimbi yensimbi yenyuswe ngo-100. Ngakho-ke, abathengisi abaningi emakethe r ...Funda kabanzi »
Yini Ishidi Lensimbi Engagqwali?
Isikhathi Iposi: 11-10-2020
Ishidi lensimbi elingenalutho linobuso obushelelezi, ubupulasitiki obuphakeme, ukuqina namandla amakhulu, futhi limelana nokugqwala ngama-acids, amagesi ane-alikhali, izixazululo neminye imidiya. Kuyinsimbi engxubevange okungelula ukugqwala, kepha ayinakho ukugqwala ngokuphelele. Ishidi lensimbi elingenalutho libhekisela ...Funda kabanzi »
Ekugcineni sekuvukile! Insimbi engagqwali egoqwe ngu-201 elinde isikhathi eside kakhulu
Isikhathi Iposi: 11-05-2020
Ukuvulwa kwe-Qingshan 201 insimbi engagqwali kunikeze ukusekelwa okuqinile ku-201 Cold Rolling, obekuntuleka ekukhuleni. Ntambama, i-Qingshan 201 insimbi engenazinsimbi ebandayo enikela nge-J1-7350 yuan / ton kanye ne-J2-7000 yuan / ton ngoDisemba, futhi abathengisi bezimakethe balandela ngokushesha. , Imakethe yamanje ...Funda kabanzi »